août 2018 – filazantsaramada
« Indro, an’i Jehovah Andriamanitrao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mbamin’izay rehetra eo aminy. » Deotornomia 10:14 Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra manambara tena. Manambara tena amin’ny zavatra noforonony Izy. Izy no namorona ny lanitra, Izy no namorona ny tany, ary ireny dia manambara an’i Jehovah Andriamanitra avokoa. Tokony hino Azy isika na […]
Publié parfilazantsaramada août 31, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur AN’IZA NY LANITRA SY NY TANY?
« Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo,raha mifankatia. » Jaona 13:34-35 Ny Filazantsara dia fisian’ny zanakondrin’Andriamanitra manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao izay nanome fomba hahazoantsika zanak’olombelona ny fiainana mandrakizay. Zava-dehibe izany. Ny Filazantsara koa dia […]
Publié parfilazantsaramada août 28, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur DIDY VAOVAO
AOKA TSY HANAVESATRA NY HAFA
« Eny, mamehy entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manainga izany eo amin’ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin’ny ratsan-tànany anankiray aza. » Matio 23:4 Ny fariseo no tian’i Jesosy ambara eto. Jesosy mampianatra ny amin’ny tsy mety amin’ny fomban’ny fariseo. Tia mijery ny hafa, ary fisehoana ivelany […]
Publié parfilazantsaramada août 17, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur AOKA TSY HANAVESATRA NY HAFA
HIALA DIA HO AIZA?
« Hianareo koa va mba te hiala? » Jaona 6: 67 Teny nataon’i Jesosy tamin’ny mpianatra roa ambin’ny folo lahy io teny io rehefa maro tamin’izy ireo no nihemotra, tsy niara-nandeha taminy intsony, tena niala. Inona no antony nampiala azy ireo? Tsy nahazaka ny teny nataon’i Jesosy. Anefa dia teny nanambaràn’i Jesosy ny tenany ho Ilay mofo […]
Publié parfilazantsaramada août 10, 2018 août 10, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur HIALA DIA HO AIZA?
MAFANA, MANGATSIAKA, MATIMATY
« Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana hianao; aleoko ho mangatsiaka na ho mafana hianao. Fa satria matimaty hianao ka tsy mafana na mangatsika, dia efa aloan’ny vavako hianao. » Apokalypsy 3: 15-16 Jesosy mampanoratra an’i Jaona ny hafany ho an’ny fiangonana any Laodikia. Jesosy velona, Jesosy maty ary tsy nijanona tamin’ny fahafatesana fa nandresy […]
Publié parfilazantsaramada août 3, 2018 août 3, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAFANA, MANGATSIAKA, MATIMATY